कोरोना केही होईन भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प चार दिनको उपचारपछि काममा फर्के – Sanchar Patrika
कोरोना केही होईन भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प चार दिनको उपचारपछि काममा फर्के
October 6, 2020 138
काठमाडौं । कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित हुनुभएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अस्पतालबाट निवास फर्किनु भएको छ । उहाँलाई कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण भएको पुष्टि गत शुक्रबार गरिएको थियो । त्यसपछि लगत्तै उहाँ सैनिक अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो । उहाँ अस्पतालबाट निवास फर्किएपनि उहाँको उपचार भने निवासबाटै जारी रहने अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थामा धेरै सुधार आएको ७४ बर्षीय ट्रम्पले बताउनुभएको छ । उहाँले चाडै नै आफु सार्वजनिक रुपमा निर्वाचनको काममा लाग्ने पनि जानकारी दिनुभयो । अमेरिकामा आगामी नोभेम्बर २९ तारिखमा राष्ट्रपतिय निर्वाचन हुन लागेको छ भने ट्रम्प पनि प्रतिश्पर्धामा हुनुहुन्छ । अस्पतालबाट ह्वाइट हाउस उहाँ छोटो हेलिकोप्टरमार्फत् जानुभएको हो । उहाँ अस्पताल जादाँ पनि हेलिकोप्टरमै जानुभएको थियो ।
ट्रम्पको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको तर पूर्ण रूपमा ठीक भने नभइसकेको उहाँको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार ट्रम्पको अवस्था निवासमा फर्कन मिल्ने खालको रहेको र निवासमा रहँदा पनि उहाँलाई २४ नै घन्टा उत्कृष्ट चिकित्सकहरूको निगरानीमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । ह्वाइट हाउस पुगेपछि उहाँले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्नुभएको छ, “मिथ्या समाचारले मिथ्या चुनावी सर्वेक्षण मात्र देखाइरहेका छन् ।”
उहाँले कारोनाबाट डराउनु पर्ने आवश्यकता नरहेकोमा फेरी पनि जोड दिनुभएको छ । उहाँले यसअघि पनि कोरोनालाई सामान्य रुपमा लिन आह्वान गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँलाई शुक्रबार राति वाल्टर रिड नेशनल सैनिक अस्पताल लगिएको थियो । अस्पतालमा उहाँलाई थेरापीलगायतका उपचारका उपायहरु अपनाइएको छ ।
उहाँ बिहीबार मध्यान्ह एउटा चुनावी कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्केपछि सङ्क्रमित हुनुभएको बताइएको छ । उहाँसँगै उहाँकी पत्नी मेलानिया पनि सङ्क्रमित हुुनुभएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नी श्रीमतीको पनि अवस्था सामान्य नै रहेको जानकारी दिनुभएको छ । त्यसैगरी ह्वाइट हाउसका अन्य कम्तीमा १२ जना कर्मचारी तथा सहयोगीहरुलाई पनि सङ्क्रमण देखिएको जनाइएको छ ।
विश्वमै सवैभन्दा धेरै मानिसहरू कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित रहेको मुलुक अमेरिकामा अहिलेसम्म दुई लाख १५ हजारभन्दा बढीको कोरोनाका कारण मृ’त्यु भएको छ । अमेरिकामा अहिलेसम्म ७६ लाख ७९ हजार ६४४ भन्दा बढी मासिन कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् ।
Prevश्वासप्रश्वासमा समस्या : कुन अवस्थामा खतरा ?
Nextचाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा नक्कली नोटको बिगबिगी, कसरी चिन्ने नक्कली नोट !
तुलसीको पात प्रयोग गर्दा हुने ७ फाइदा
ब्रेकअपको खबर सेलाउन नपाउँदै फिटनेस प्रशिक्षकसँग डेटमा इरा खान !
श्रीमतीलाई खुसी बनाउने ७ सुत्रहरू ! हरेक पुरूषले पढ्नुपर्ने
अ’वैध रुपमा मृगौला प्र’त्यारोपण गरेको अ’भियोग भरतपुर मेडिकल कलेजका चार डाक्टर प’क्राउ